प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल नियुक्त, यस्ताे छ पृष्ठभूमि? – Himalaya TV
Home » समाचार » प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल नियुक्त, यस्ताे छ पृष्ठभूमि?
प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल नियुक्त, यस्ताे छ पृष्ठभूमि?
२ फाल्गुन २०७४, बुधबार १८:५१
लाेकेन्द्र भट्ट/ काठमाण्डौ, २ फाल्गुन । प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल नियुक्त भएका छन् ।
उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा वाम गठबन्धनका नेताहरुले संयुक्त रुपमा चार दिनअघि दाबी पेश गरेका थिए । जसअनुसार प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले अाज एमाले संसदीय दलका नेता पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पोखरेलले भोलि सपथ लिनेछन् । भोलि नै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने एमाले र माओवादीको गृहकार्य छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले–माओवादीको प्रष्ट बहुमत छ । एमालेका ४१ र माओवादीका २० गरी वाम गठबन्धनकै ६१ सांसद छन् ।
पाेखरेलकाे यस्ताे छ पृष्ठभूमि
दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्वर २ को प्रदेश सभा ’क’बाट पाेखरेल विजय भएका हुन् । नेपालको बामपन्थी आन्दोलनमा शंकर पोखरेल स्थापित नेता हुन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेका पोखरेलको बैचारिक र राजनीतिक क्षमता र संगठनात्मक कार्यकुशलतालाई उदाहरणीय मानिन्छ ।
विक्रम सम्वत २०१९ सालफागुन १५ गते दाङ, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १९, हाडिमेमा बुवा केशवराज शर्मा र आमा तिलका देविको कान्छो सन्तानको रुपमा जन्मनु भएका पोखरेल हाल नेकपा एमालेको स्थायी कमिटि सदस्य हुन् । २०३६ सालमाभएको विद्यार्थी आन्दोलन, २०४५-४६ मा पञ्चायती ब्यवस्था अन्त्यकालागि भएको आन्दोलनकोमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु भएका पोखरेलले २०६२-६३ को जनआन्दोलनमा काठमाण्डौको मोर्चावाट आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए ।
अघिल्लो संविधानसभामा राज्य पुनसंरचनाको खाका कोर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएका पोखरेल ३२ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक २०५१ सालमा दाङको क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचि भएका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीएतहको अध्ययन पुरा गरेका पोखरेल भू राजनीति र अर्थशास्त्रबारे राम्रो ज्ञान भएका नेतामध्ये एक हुन् ।
हाल पार्टीमा पोखरेलले पार्टि स्कुल विभागको उपप्रमुखको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरि रहेका छन् । नेकपा एमालेलाई बहुपदीय प्रणालीमा लैजान उल्लेख्य भूमिका खेलेका पोखरेल पार्टीमा प्रष्ट बैचारिक दृष्टिकोण, राजनीतिक अडान र कार्यशैलीमा एकरुपता कायमगर्न सक्ने नेताकाे रुपमा चिनिन्छन् ।
विगतमा पार्टी सचिवको रुपमा काम गरे पोखरेलले सूचना तथा संचार मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसक्नु भएको थिए । पोखरेलका राजनीतिक, बैचारिक र समाजका विविध क्षेत्रमा थुप्रै पुस्तक र लेख रचनाहरु प्रकाशित छन् ।
पटकपटक जेल र दर्जनौ पटक हिरासतमा रहेर राजनीतिक स्वतन्त्रता, जनहित र समानताको पक्षमा संघर्ष गर्नुभएका पोखरेल समग्र नेपालको आर्थिक विकासको खाका कोर्न सक्ने क्षमता भएका नेता हुन् । पोखरेलकी श्रीमती एमाले नेतृ सुजिता शाक्य हाल एमाले केन्द्रीय सदस्य र अखिल नेपाल महिला संघको सचिव हुन् । उनका दुई छोरी छन् ।